Landa i-Spirit of Justice apk yakamuva kakhulu yi-CAPCOM CO., LTD. yamadivayisi we-android | ApkDi.com
! Ukuphikisa! ” impi ezinkantolo ekhaya nakwamanye amazwe kulokhu kungenwa kommeli we-6th.
Azikho "Izinto eziphikisayo!" ekungeneni kwakamuva ochungechungeni lwe-Ace Attorney! Joyina i-Phoenix Wright ne-Apollo Justice njengoba bephatha amacala ekhaya nakwamanye amazwe!
Njengoba sinezinhlamvu ezimibalabala, kufaka phakathi ukubuya kwesithandwa se-Maya Fey esithandwa ngabathandi, lo mdlalo wobude obugcwele ugcwele iziphetho ngezimfihlakalo ezintsha nemidlalo yasenkantolo engalibaleki.
* Ngokungeziwe kumdlalo oyinhloko (iziqephu 1 kuye ku-5), iziqephu ezikhethekile ze-Special Episode ne-Costume Set zifakiwe ngokuthengwa kwalolu hlelo lokusebenza.
* Qaphela: Sicela ufunde isigaba esisha esithi "Mayelana nalolu hlelo lokusebenza" ekugcineni.
Khomba indlela Yakho Yokunqoba ◆
Mane uthephe isikrini ukuze udlale. Isibonisi esibonakalayo sifaka izici eziwusizo njengokubhala emuva ukuze ufunde futhi ubufakazi kanye nengxoxo yendaba.
Vestig Uphenyo Lokugxila ◆
Hlola ngokukhululekile izigcawu zobugebengu ze-3D ukuze uthole ubufakazi futhi ukhulume nofakazi ngolwazi ongalusebenzisa enkantolo.
* I-Forensic Uphenyo I-Gameplay ibuya ku-3D! *
Usosayensi we-Forensic u-Ema Skye usebuyile, futhi kunjalo nangezivivinyo zakhe eziningi zobunhloli! Ukusuka ekuprintweni ngeminwe kuya ekuhlolweni kwe-luminol, zama isandla sakho ukuthola imikhondo endaweni yesehlakalo nobugebengu obukhona ku-3D!
Als Isivivinyo Esishesha, Esijabulisayo ◆
Chitha amanga bese uxazulula ukungqubuzana phakathi kwamagama wofakazi kanye nobufakazi. Kuzothatha iso elibukhali futhi umuntu obukhali kakhulu ukuxazulula la macala!
Imigwaqo Yokubhula *
Esikhundleni sobufakazi obufakazelwe, iRoyaloyalessess of Khura'in inikeza inkantolo imininingwane yakhe yaphezulu, okuyizincazelo zayo zememori yokugcina yomhlukunyezwa. Thola amaphutha emiBhalweni yakhe ngokuwaqhathanisa nombono we-Séance kanye nobufakazi, bese uveza ukuthi kwenzekeni ngempela!
CastIzinhlamvu Ezinemibala Egqamile ◆
UPhoenix Wright nabameli bakhe abasebasha babhekana nabalingiswa abasha abasha abathandekayo, abahlekisayo, nabanobunzima ngezinye izikhathi. Izintandokazi zabalandeli zibuye zibuyele ngaphansi kwezimo ezithile ezingajwayelekile!
Ists Amasontane Amangazayo ◆
Inenjabulo ekuxazululeni izimfihlakalo futhi umamatheke izinhlamvu zama-shenanigans ezihlekisayo. Idrama kanye nengxoxo kuzokugcina uhleka, ukhala futhi uqagela kuze kube sekupheleni!
Content Okuqukethwe okungaphezulu kokukhanya okunenhliziyo
Gqokisa abakhongi abathathu ogqoke izingubo bese uzisebenzisa kumdlalo oyinhloko wokuvivinya okungahlosile!
Kuhlanganiswe nebhonasi, isiqephu esikhethekile, “Turnabout Time Traveller”. Le ndaba yangemva komdlalo inomngane wobuntwana wasePhoenix uLarry Butz, Umshushisi wesikhathi eside uMiles Edgeworth, nalowo owayengumsizi wezomthetho owayekade enguMaya Fey. Njengoba iqembu lihlangene futhi, uyazi ukuthi okubi nokubi kungenzeka kube ngemuva kakhulu!
Support Ukusekelwa Kwemidlalo YeGoogle Play ◆
Dlulisa ugcine idatha phakathi kwamadivayisi kalula nge-Google Play Imidlalo yokudlala ekhaya noma usohambeni!
Indaba ekulo mdlalo iyafana nakwezakhululwa ezedlule.
Dev Amadivayisi Asetshenziswayo ◆
◆ ◇ Isethaphu Nemvelo ◇ ◆
Versions Izinhlobo ezisekelwayo ze-OS:
I-Android 5.0 kuye ku-9.0
Requ Izidingo ezimbalwa ze-Hardware
(Ama-Intel processors awaxhasiwe)
QAPHELA: Ungathenga futhi usebenzise lolu hlelo lokusebenza kudivayisi engahlangabezani nezidingo ezisohlwini olungenhla, noma kunjalo, asinakuqinisekisa ukuthi izosebenza kahle. Ngokwengeziwe, asikwazi ukunikeza ngembuyiselo kulawo macala lapho ucingo lungafinyeleli khona kulezi zidingo ezingenhla.
In Imibuzo Ukusekelwa Kwedivayisi ◆
Ukuthola ukuthi idivaysi yakho isekelwa, sicela ubuze lapha:
・ Ukulanda Khipha ku-internet
Ngenxa yobukhulu bawo obukhulu, sincoma ngokuqinile ukuthi uhlelo lokusebenza lulandwe nge-Wi-Fi.
◆ Mayelana Lolu hlelo lokusebenza ◆
Ukwethulwa komdlalo ngenkathi ikwimodi ethule
Lolu hlelo lokusebenza luzoqala kumodi ethule uma ifoni yakho isivele ikwimodi ethule. Ukulungisa ivolumu yomdlalo, sicela usebenzise islider yevolumu yocingo. Lokhu akusebenzi uma usebenzisa amahedfoni.
・ Ukuqinisekiswa kwe-inthanethi
Ukuqapha ubuqili, lolu hlelo lokusebenza luzozama ukuqinisekisa idivaysi yakho lapho uhlelo lokusebenza luqala. Sithokozela ukuqonda kwakho ngalolu daba.
Funda kabanzi mayelana "nommeli we-Ace"
Imidlalo eminingi yeCapcom:
isigaba: Free Adventure Game
usuku lokushicilela: March 17, 2020
inguqulo yakamuva: 1.00.01